ARCHIVE, BLOG, SPECIAL » गाडी किन्न राष्ट्रपतिको १६ करोड माग यसकारण सहि छ, तथ्य नबुझी बेतुकको रोइकराई किन ?
राष्ट्रपति कार्यालयले गाडी किन्न १६ करोड रुपैयाँ माग गरेको खबर यतिबेला चर्चामा छ । चियापसलदेखि पाँचतारे होटलसम्मका चियागफ, व्हिस्की बहस, वा अनौपचारिक कार्यक्रममा यो विषयले ठुलै चर्चा पाएको छ । मिडियाहरु १६ करोडको गाडी कस्तो हुन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित छन् । राज्यको ढुकुटी सिध्याउने खेलमा राष्ट्रपति कार्यालय लागको भन्ने आरोप लगाउनेहरु पनि छन् ।
पदिय गरिमाको लागि १६ करोडको गाडी किन्ने निर्णय जायज हो । पदमा रहुन्जेल प्रयोग गर्न पाउने त होला नि ? आज त्यो पदमा एउटा व्यक्ति छ , भोलि आर्को हुन सक्छ । एउटा राजनैतीक सन्स्कार र राष्ट्र प्रति जिम्मेबारपनि त्यो पद र सुबिधाले गराउने गर्दछ । खोक्रो आदर्शले केही हुने वाला छैन । राष्ट्रपतिलाई के अब साइकलमा हिंड्नु भन्ने अलिकती बिबेक संगत कुरा गर्नु पर्छ कि नाइ ? राष्ट्रको झल्को दिने पदको गरिमा पनि जोगाउनु पर्‍यो कि नाइ ? हिजो सगरमाथा चडदा करोडौ छुट्टाउनेहरु फेरी आज रोइलो गाउछन । भोली तपाईं त्यो पदमा पुग्दा पनि त्यै गाडी हो नि चड्ने होइन र ? सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने सुबिधा उपभोग गर्‍यो भनेर किन रुनु ?
राष्ट्रपतिले १६ करोडको गाडी चढछिन कि भनेर रुनेहरुलाई आज म प्रश्न गर्दै छु । एउटा पदमा सधैं एउटै व्यक्ति रहन्छ र ? राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो पदलाई सुसज्जित गर्दा हाम्रै लुगा फाट्टो खोसिए झै बच्चाले सिगान निकाल्दै सुइक्क सुइक्क गरेर रुनुको पनि अर्थ हुन्छ र ? राजनीतिक चेतना अभ्ब्रिद्दी भो भन्ने लाग्थ्यो तर यहाँ अहिले हुर्केको राजनैतीक सन्स्कार हेर्दा , शरीर बढ्यो तर लुगा पोहोर साल कै भने झै भो हुन्छ ? अब त्यो लुगा न मिनीस्कर्ट न फुल स्कर्ट ? भजनबादमै रहनुभएका राजनैतीक चेलाहरुको चेतना हेर्छु : आफ्नाले त्यही छोटो जामा लाउदा हिपपप अनि आर्काले त्यही लाउदा लाज नै देखियो रे ? हे प्रभु , चेतना र बस्तु सँगै हुर्कान्छ कि बस्तुले चेतनाको निर्माण गर्छ ? बुझेर मात्र विरोध गरौँ । विरोधका लागि गरिएको विरोधको कुनै तुक छैन ।